Somali daily News – Eng Yariisow Maxaa laga Filayay?? Muxuusa Noqday?? Akhriso
Saxaafada Soomaliya lixdii sano ee ugu dambaysey waxay ku sugnayd xaalad is bar-bar yaac ah oo waxaa jirey labo Hoggaan oo ay kala hogaaminayeen Maxamed Ibraahim Bakistaan iyo Cumar Faaruuq Cusmaaan, iyadoo sidaasi jirto ayaa labada nin waxay u qoor dhiibteen Odeyayaasha Saxaafadda oo in badan ku jirey Warbaahinta Magacna ku leh Bulshada Dhexdeeda si loo soo afjaro dhibaatada mudada dheer haysatay Weriyaasha Soomaaliyeed oo in badan oo ka id si bareer ah meelo kala duwan loogu diley.
Gudigii waxay isla garteen in la qabto shirwayne qaran oo lagu doorto Hoggaan cusub iyagoo ka duulaya in labada ninba aanu sharciyad ku doodi Karin maadaama uu ka dhamaaday xiliyadii la doortay oo ay ku doodi jireen, waxayna warqad ruqsad ah ka soo qaateen maxkamada sare ee Dalka si hadhoow wixii halkaas ka soo baxaahi ay xalal u noqdaan.
Markiiba waxaa Ergooyin kala duwan ka kala yimaadeen Gobolada dalka si ay u doortaan hoggaan cusub, waxaaana doorashadaas oo cajiib ahayd la isla gaarey saqdii dhexe ku soo baxay Gudoomiye Maahir Jaamac Aadan oo ka tirsanaa Saxafiyinta Boosaaso, waxaana ku xigeeno loo doortay Muxiyadiin Xusni oo Baydhabo ka yimid iyo Cabdifatax Xasan Faarax oo Dhuusamareeb ka yimid, sidaas si mid ah waxaa Xoghayaha Guud loo doortay Maxamed Ibraahim Mucaliuu oo reer Muqdisho ah.
Durba waxaa soo dhoweeyey Madaxwayne Xasan Sheikh, waxaa looga sheekeeyey halka ay ka kala yimaadeen Saxafiinta uu kulanka la leeyahay iyo qaab dhismeedka ururka. Isagoo Illini ku taagan tahay waxa uu yiri. “Tallaabada aad qaadeen waa mid ku dayasho mudan oo laga masayro” waa uu sii hadlay oo waxa uu yiri. “Sida aad u dhisan tihiin iyo halka aad ka kala timaadeen waa waxa aan ka waayey Dhismaha Ciidamada Soomaaliya iyo Shaqaalaha Dowladda”. Intaas wixii ka dambeeyey waxa la is lahaa waxaa halkaas ku dhamaaday caqabadihii soo jireen ahaa ee ragaadiyey Saxafiyiinta Soomaaliyeed, waxaadna moodey Xiligii Xasan Shiikh in Talaabooyin Horumar ah la qaadey
Markii Hogaanka cusub ee dalka la doortay 2017 waxa Wasiirka Warfaafinta loo magacaabay Ing. Cabdiraxmaaan Yariisoow, runtii waa lagu farxay sababtoo ah waxa uu ahaa shaqsiga kaliya ee Warbaahinta Soomaaliya wax badan ka ogaa sanadihii ugu dambeeyey, laakiin magacaabistii Wasiir Yariisoow waxay nqotay ka Dar oo Dibi dhal oo waxaa dib u soo noolaaday Qaskii iyo fowdadii sanado badan soo jirey oo waxaa mar kale la jiljilay Hoggaanka sharciga ah ee NUSOJ. Waxay arintaasi dibada timid markii dad ku qarabanaya magaca Saxafiyiinta Soomaliyeed iyo kuwo fowdo uun u taagan ay ka duuleen Garoonka Muqdisho, waxaa Marag ma doonta ah in aan laga dhoofi Karin Garoonka Muqdisho adiga oo aan ogolaansho ka haysan hadba Wasaarada uu khuseeyo Barnaamijkaaga.
Guntii iyo Gebagebadii ma waxaan dhihi karnaa Wasiir Yariisoow kama war hayo shaqsiyaadka huwan magaca Saxaafiyiinya Soomaliyeed ee ka dhoofaya Garoonka Aadan Cadde iyagoo ku sii jeeda dal kale? Jawaabta waxaan u daayey Akhristayaasha, Sidaa darteed arimahan is biirsaday iyo tuhunka jira ee sheegaya in wadashaqayn lala leeyahay Cumar Faaruuq Cusmaaan sow lama dhihi karo Ing. Yariisoow waa Wasiir lagu Hungoobey.
N.B. NUSOJ: Waa urur madax banaan oo aan hoos tagin Wasaarada Warfaafinta Soomaaliya laakin ay kala dhaxayso wada shaqayn la xiriirta Warbaahinta Soomaaliya.